Ingabe siyaqonda isikhathi uhlamvu Israyeli? | Apg29
Israyeli kubuyiselwa njengesizwe namaJuda bahlangana emuva ezweni.
Manje thina akusadingeki ulinde amaJuda uzobuyela ezweni labo, kwaba ngokoqobo kwengu-70 edlule.
Ingabe siyaqonda ukuthi kusho ukuthini lokhu?
Uma singakuqondi lokhu, kusho ukuthi thina kuzonqatshelwa ekuqondeni izwi lesiprofetho. Kungase kuzwakale okukhulu, kodwa kungase empeleni libekwe kanje.
Ngakho lapha sisho. Sekuphele kwenzeka engu-70 edlule okuprofethwe ngokucacile ukuze labo ukufunda iziprofetho zeBhayibheli kusengaphambili baye baqaphela ukuthi lokhu kuzokwenzeka nini.
Lapha sizobe kuphela ukunikeza izibonelo abangamaKristu esikhathini wabona izwi lesiprofetho.
Esikhathini 1600s, wahlala John Owens, owayengumholi isonto IsiZulu yenkolo. Kube ngaleso sikhathi hhayi inhlansi yethemba ukuthi amaJuda ezisuke zibuyele emazweni azo. Naphezu kwakho konke lokhu wabikezela John Owens kanje:
"AmaJuda uyobuthelwa abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba lapho zihlakazeke futhi yabuyiselwa ezweni lakubo."
Umlobi YamaProthestani uPawulu Glegenhauver wabhala lokhu 1655: "Ukubuya unomphela amaJuda ezweni yabo Phakade ayeyabelwe kukaNkulunkulu ngokungazi zithembiso angenamkhawulo ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe."
Sizothatha ezinye izibonelo kusuka eyikhulu. Agasti Hedstrom wanika ngo-1912 banyathelisa incwadi yakhe ethi Studies in the iziprofetho.
Kuyo wabhala: "Ekugcineni, phawula ukuthi Uti Turkish Empire ngeke ngaleso sikhathi ukuba ezimele isimo khulula, okungukuthi koMbuso WamaJuda, noma lokho kuyothiwa."
Nongqongqoshe IsiDanishi C. Skovgaard-Petersen wabhala incwadi Izimpawu nezikhathi, yanyatheliswa 1919th
Kule ncwadi umbhali sinika inchazelo ngaphambi uJesu ubuyela, ngakho amaJuda kuyoba emuva ezweni lakhe. Wabhala lokhu:
"Kodwa noma kunjalo kufanele kubhekwe njengento leBhayibheli, ukuthi Israyeli uyabuthwa ezweni labo futhi in a vårbrytning ngokomoya ngaphambi kokuba kufike iNkosi. Izinhlamvu awagcwaliseki, amaJuda ungakabi ifa Palestine. "
Ngaphezu kwalokho wabhala Skovgaard-Petersen: "Ngakho-ke Singalindela ukuthi kumele kube amaJuda ngaphambi ukubuya kukaJesu Kristu kanye owabuyela ezweni lakubo."
Yini manje Nokho ziyeza eduze liwukuthi uJesu nganoma isiphi isikhathi ubuya, ngoba izimo lesiprofetho eyisisekelo kulolu eziye zagcwaliseka ngayo. Ingabe siyaqaphela lokhu futhi uthathe ngemiphumela ke?
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 00:46